स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : खोप खरिद गर्ने काम स्थानीय तहको होईन ! - Sidha News
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : खोप खरिद गर्ने काम स्थानीय तहको होईन !
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आफैं खरिद नगर्न भनेको छ । केही स्थानीय तहहरुले खोप खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिरहेका बेला सरकारको यस्तो धारणा बाहिर आएको हो ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय संघीय सरकारको रहेको भन्दै सरकारले सबै नागरिकलाई खोप दिने घोषणा यसअघि नै गरिसकेकोले बरु मन्त्रालयको यो काममा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पाखरेलले सरकारसँग सहजीकरण गरेर यो कार्यमा स्थानीय तहले सहयोग गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिकालगायतले खोप किन्न अनुमति माग्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए ।
स्थानीय तहहरुले खोप खरिद गरेर ल्याउन सक्ने सम्भावना, त्यसको प्राविधिक, स्टोरेज, अनुगमन, मूल्यांकन, कोल्डचेनको व्यवस्थापन लगायत अन्य त्यसबाट हुने जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन अत्यन्तै कठिन रहेको उनले बताए ।
दुवै डोज खोप लगाएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण दर एकदम कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संक्रमण भइहाले पनि अस्पतालमा भर्ना हुने दर कम रहेको उनले बताए । खोपले शतप्रतिशत मानिसलाई नबचाए पनि धेरै नागरिकलाई बचाउने उनको विश्वास छ ।
खोपको प्रभावकारितासँगै केही स्थानीय तहहरुले खोप खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक पर्ने नीति तथा निर्णयबारे आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका थिए ।